Qayb 2aad: Su,aalaha Dadweynaha in Laga Jawaabo oo la Qanciyo waa Muhiim – Rasaasa News
Jul 1, 2009 Jwxo-shiil, Jwxo-shiilada
Su,aasha Maanta waxay nooga timid Akhriste si joogto ah u akhrista bogga rasaas.com, wuxuuna na soo waydiiyey dhawr su,aalood oo aan filayo in ay dadku ka faa,iidaysan wax badan ka ogaan Jawaabaha Su,aalahan. Su,aaluhuna waxaa ay u qoran yihiin sidan.
MARKII AAN AQRIYAY SU’AAL AAD MAANTA KA SOO JAWABTEEN AYAAN GO’AAN SADAY INAAN IDIN WAYDIIYO ANIGUNA SU’AAL:0- hadii uu maxamed cumar cusman sharciga jabiyay sidee ayaa ugu haboon oo sharciga loo fulin karaa? ma in lacaayo oo la aflagaadeeyo mise in dadkeenna la qanciyo oo shir loo dhanyahay la qabto?
Su’aal kale : ina cumar cisman waxa ladoortay 1998 oo xilka loo dhiibay ee salaxudiin macow yaa udoortay xilkan aad ku sheegaysaan? miyaysan haboonayn inaad isla tuurtaan oo aad dhahdaan ONLF gudoomiye ma laha eegga?
akhriste joogta ah ayaan ahay ee jawaab ayaan mutaystay waana sugayaa.
Su,aashaada Waxaa Jeclaystay in uu ka Jawaabo H.Magan
Aad iyo aad ayaan kuu salaamayaa, waxaadna ku mutaystay macmiilka aad u tahay bogga rasaas.com. Waxaad su,aashaada ku bilowday shardi adiga oo leh HADII [conditional …If], shardiga oo micnaha su,aashada haatan, waa waxba ma uusan samaynin Jwxo-shiil.! Arintaas waxaan filayaa in aad aad u ogg tahay wax uu bi,iyey Jwxo-shiil, balse waad ku qanacsan tahay waxa uu sameeyey cadaaladuna sidaas ma ah. Waxaa fiicnaan lahay in aad tidhaa, Jwxo-shiil sharcigii wuu jabiyey ee sidee inaga oo wada jira aynu wax u qabanaa oo aynu u ciqaabnaa, hadii ay su,aashu sidaas tahay sidan ayaan u jawaabi;
Waxaan filayaa waxaa jira xubno uu leeyahay ururka Jwxo, waxaana wanaagsan in xubnuhu sharciga ilaaliyaan sharciguna uu ruux walba ka sareeyo, hadiise ay muuqato in ruuxu sharciga ka sareeyo kaasi sharci ma aha. xubnuhuna xubno ma ah, waayo xubnaha ururku iyaga ayaa sharciga ka sareeya iyagana waxaa ka sareeya Jwxo-shiil.
Kolkii sharciga ururku uu sharci noqon waayeyna waxaa diiday in ay ixtiraamaan ururka Jwxo dadweynaha Somalida Ogadeeniya, waana taas mid maanta socota. Si,aad u hesho Jawaab waafi ah fadlan akhri ciwaanka [Horaa Loo Yidhi “Indho Wax Xun Arkaya Afkoodaa qar Nugul” ee lagu qoray rasaas.com June 28, 2009].
Cayda aad sheegtay, wax waliba waxaa uu lee yahay wax u asal ah oo sababay [Mann sharrafa Nafsahu Fa Huwa Shariif], ruuxii xishooda ayaa laga xishoodaa, Jwxo-shiil wuxuu hore u ahaaba, maanta sharaf kum leh ummada Somalida Ogadeeniy, dhibaatada ku habsatay halgankii aan wada jeclayna, waad la socotaa halka uu dhigay. Waxaan qabaa waa in ay jireen, dad halganka dhexdiisa ku jiray oo jeclaa Jwxo-shiil, ummaduna waxba uma qabin, maantase Somalida Ogadeeniya daayoo Somaliweyn buu dambi ka galay oo aan arki karin.
Waa runtaa oo Jwxo-shiil waxaa gudoomiye u doortay in uu u noqdo, xubnaha ururka uu ka midka yahay, kolkaas la doortayna ma ahayn xubin ururka ah, waxayna ahayd 1998 isaga oo la yidhaahdo Maxamed Cumar Cismaan.
Waxaana loo doortay in uu muddo 4 sano ah uu gudoomiye ahaado, ka dibna doorasho la qabto, hadii ay doorashadu qabsoomi waydo waxaa loogu darikaraa 2 sano sida uu qabo sharciga ururka Jwxo, hadii ay suurtoobi waydo in la qabto mar labaad shirka ururka, si loo doorto gudoomiye waxaa loogu dari xilka gudogomiyaha xilka hay muddo hal sano ah. Xiligaasi kolka uu dhamaado hadii aan la qabanin shirka ururka si gudoomiye loogu doorto ma jirayo gudoomiye ruuxii sheegataana waa sharci daro.
Hadaba doorashadii 1998 ka dib, kolkii ugu horaysay Xiliga Maxamed Cumar Cisman wuxuu dhamaaday 2002, waxaana suurto gal noqon wayday in la qabto shirweyne, waxaana uu sharcigu ogolaaday in 2 sano loogu daro, kaas oo uu xiligiisii 2aad dhamaaday 2004, sidda ay doonto ha ku dhacdee waxaan qabsoomin shirweynihii lagu dooran lahaa gudoomiye, mar saddexaad sida sharcigu qabo waxaa loogu daray 1 sano, kaas oo dhamaaday 2005.
June 2006, Waxaa uu ururka Jwxo noqday gudoomiye la,aan, waxaana la magacaabay guddi ka koobanaa 15 ruux ah oo sii haynayey xilka, si wada jira ah inta laga qabanayo shirweynaha si loo soo doorto gudoomiye.
Waxaan filayaa in aad la socoto in xubnaha ururku ay xilkoodii gudan waayeen December 2006, oo ay bilaabatay wax aan laga filaynin oo aan hore loogu aqoon xubnaha ururka Jwxo, qaarkood oo uu ku jiro Jwxo-shiil.
Xiligaas, ayey tirada intii badnayd [Majority] ee xubnaha ururku waxay yeesheen kulamo is dabo joog ah oo ka dhacay Ingriiska, Maraykanka iyo dalka Jarmalka oo ugu dambayntii lagu doortay Gudoomiye ku meel gaadha oo uu yeeshay golihii awal xilka sii hayey, wuxuuna ahaa Eebe Naxariistii Jano ha siiyee Dr.Maxamed Siraad Doolaal 2007.
Kolkii uu Shahiiday Dr. Dolal waxaa Gudoomiye loo doortay Engineer Salaxdiin Cabdiraxmaan 2009, oo haya maanta xilka hogaanka ururka ONLF.
Waxaan filayaa in aan ku siiyey Jawaab waafi ah
Kooxda Sudhayo oo ku Wareersan Been Abuurka Jaaliyadaha, Iyada oo aan la Garanayn Wax ku Kalifaya